Cava famarotan-tena mivezivezy matetika amin'ny terminal
Kabin-tsaramaso famatsiana ho an'ny fiafarana ao anatin'ny 20 segondra mampiasa induction.
DW-UHF-6KW-Mpandava fitaovam-piasan'ny tanana
• 0.078 ″2 (50mm2) fantsona tariby
• 0.078 ″2 (50mm2) tariby
• Alloy marika Sn60Pb38Cu2
Fotoana: 15-20 sec
Suhu: 500 ° F (260 ° C)
Ny 0.078 ″2 (50mm2) ny terminal tariby dia miraikitra amin'ny 0.078 ″2 (50mm2) tariby
Ny fivoriambe dia napetraka ao anaty coil ary induction heating dia ampiharina.
Ny mari-pana amin'ny mari-pana dia 4 -5 sec. Ny mari-pana dia mihazona tsy tapaka amin'ny famenoana ny dingana fividianana. Ny fametahana tongotra dia ampiasaina hanombohana sy hampitsaharana ny masinina.
Aorian'ny 15-20 sec, ny tariby sy ny tariby terminal dia amidy soa aman-tsara.
Rafitra fametrahana fanentanana mety ho an'ny dingana:
Ny mpanafatra fitaovam-piasan-tànana DW-UHF-6KW-I dia mitaky fotoana lava hahatratrarana hafanana sy famerana tanteraka.
Fanamorana ny induction manome:
Faritra hafanana voafantina sy voafaritra tsara, ka mahatonga ny tsy fanelingelenana sy ny fihenjanana miaraka aminy
Valim-pifanarahana marim-pototra sy fahavitrihana ho an'ny famokarana volombolobe, raha tsy mila ny fanodinana batch
Teknolojia tsy misy fandotoana, izay madio sy azo antoka
Sokajy Technologies Tags tariby fampidirana avo lenta, mpivaro-bidy, tariby famatsiana varotra, Cava famarotana araboka ho any amin'ny terminal, induction soldering fanaterana, induction soldering machine, Tariby fofona RF, tariby varotra, milina fanolanana, tariby fampidirana ultra ambony Post Fikarohana